စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်များ ပထမအကြိမ် စုပေါင်းဘုံကထိန်ခင်းလှူဒါန်းမည်
စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်များ ပထမအကြိမ် စုပေါင်းဘုံကထိန်အဖြစ် ၈-၁၁-၂၀၀၈ရက်တွင်
ရေတံခွန်တောင်ခြေအနီးရှိ အောင်ချမ်းသာ တောရကျောင်းတွင် ကထိန်ရေစက်ချလို့
ဘုန်းကြီးကျောင်းက တောရကျောင်းဖြစ်တာနဲ့အညီ ဘာမှကို မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အမိုးများကလဲ ကြယ်မြင်လမြင်ဆိုပဲ . .
နေတဲ့ သံဃာက နှစ်ပါးထဲပါ။
ကထိန်ဖြစ်မြောက်ဖို့ အပြင်က သံဃာ သုံးပါးပင့်ပြီး ငါးပါးစာ လှူဒါန်းသွားပါမယ်။
ကျောင်း အမိုးမိုးဖို့လဲ ကြိုးစားနေပါတယ်။
ပထမအကြိမ် ကထိန်ပွဲဆိုတော့ အားလုံး တက်ကြွ ၀ိုင်းဝန်းနေကြပါပြီ . . .. .
Posted by Unknown အချိန် 6:04 PM2comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဟိန္ဒူ ရိုးရာကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မယ်တော်စန္ဒီရေမျှောပူဇော်ပွဲကို ယနေ့ ညနေပိုင်းက မန္တလေး ၃၅လမ်းတစ်လျှောက်ကနေ
ဟိန္ဒူကိုးကွယ်မှုအဖြစ် ဗြဟ္မာကြီးက တစ်ဆင့် ဘုရား ၁၀ပါးအသွင်ပြောင်းပြီး
လူသားများကို ကယ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအထဲက ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မယ်တော်များစွာထဲက
ဘ၀ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စန္ဒီမယ်တော် ရေမျှောပူဇော်ပွဲကို နှစ်စဉ် ကျင်းပခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နှစ်စဉ် မယ်တော်ရုပ်တုကို ရုပ်လုံးကြွ ထုလုပ်ကာ ပူဇော်ပွဲကို ဘုရားကျောင်းများမှာ ကျင်းပကြပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၀ရက်နေ့မှာ ရေမျှောပူဇော်လေ့ရှိပါတယ်။
အကများ၊ တေးသီချင်းများဖြင့် ရိုးရာ ပူဇော်ကြပြီးနောက်
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ရေမျှောကြတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 7:29 PM 1 comment: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
တရှိုက်မက်မက် တေးစီးရီး အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ
ချစ်သုဝေ၊ ချစ်ဆုဝေ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ တရှိုက်မက်မက် တိတ်ခွေနှင့်အော်ဒီယိုစီဒီများမှာ အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို
ယနေ့ ညနေက ၇၈ရှော့ပင်းစင်တာ ဟက်ပီးဝေါလ်မှာ ကျင်းပပါတယ်။
ညီအစ်မနှစ်ဦးလုံး အနက်ရောင် အကျီလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လက်မှတ်ထိုးပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ရန်ကုန် ဟက်ပီးဝေါလ်လိုပါပဲ မန္တလေးမှာလဲ အနုပညာရှင်များရဲ့ ပရိုမိုးရှင်း လက်မှတ်ထိုးပွဲများကို လက်ခံကျင်းပပေးနေပြီး
သူရဲအိမ်၊ သူရဲရထားစတဲ့ လက်မှတ်များကိုပါ ထည့်သွင်းလက်ဆောင်လေ့ရှိတာကတော့ ဟက်ပီးဝေါလ်ရဲ့ စေတနာလို့ ပြောရမလိုပါပဲ . .
သင်္ကြန်မှာ မန္တလေးမှာ ကျတဲ့ ချစ်သုဝေတစ်ယောက် ပရိသတ်များ လာရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးကြသူများနဲ့ စည်ကားလို့ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်များအား ကထိန်သင်္ကန်းနှင့် တောင်ပေါ်ဒေသရှိ ကျေးရွာများအား လှူဒါန်းမည့်အစီအစဉ်များ
ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာပြန့်ပွားရေးအသင်းဆိုတာ တောင်စလင်းတိုက်သစ် ဘာဝနာဌာနမှာ
တည်ရှိပါတယ်။ ၀ါကင်းကုန်းဆရာတော်လို့ အမည်ကျော်ကြားသော ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ
တိက္ခ (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ) ဦးဆောင်တော်မူပြီး ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးလှဝင်းက
ဗုဒ္ဓဘာသာကို တောင်တန်းဒေသများမှာ ပြန့်ပွားရေးအတွက် အထူးကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့
အထူးသဖြင့် လူသူအရောက်အပေါက်နည်းပါးတဲ့ ချင်းတောင်တန်း၊
နာဂတောင်တန်းများကို အဓိက ထားနေပါတယ်။
မန္တလေးမြို့မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်မှာ
ရဟန်းတော်များအနေနဲ့ ဘွဲ့ရရှိရေးအတွက် တောင်တန်းဒေသများမှာ သာသနာပြု နှစ်
နှစ် ကြွရပါတယ်။ ဒီလို ကြွရာမှာ ယခင်ကတော့ တောင်တန်းဒေသ
တိုင်းရင်းသားများအနေနဲ့ အယူဝါဒ ကွဲပြားမှု၊ ရဟန်းသံဃာတော်များ
ဖူးမြင်ဖူးခြင်းမရှိတာကြောင့် အလွန်ပဲ ခက်ခဲပင်ပန်းကြပြီး
အသက်အန္တရာယ်အထိတောင် ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆရာတော်က မိန့်ကြားပါတယ်။
အခု အချိန်မှာတော့ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ အစွမ်းနဲ့အတန်ငယ် အဆင်ပြေလျက်ရှိပါတယ်။
တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ အတွေ့အကြုံပေါ့ဗျာ
တောင်ပေါ်လူမျိုးစု ရွာတစ်ရွာမှာ အဲဒီဆရာတော်က သာသနာပြုပါတယ်။
တောင်ပေါ်ဆိုတော့ တီဗီဆိုတာ မကြည့်ရပါဘူး
တီဗီပြရင် တိုင်းရင်းသားတွေ တီဗီကို စိတ်ဝင်စားမယ်ပေါ့
တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ နယ်စပ်က တိုင်းရင်းသားကလေးများ
မြို့ပေါ်က ကလေးလိုတော့ ဘယ်ယဉ်ကျေးမလဲ
ဒါနဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကြီးဆီမှာ တီဗီ အလှူခံပါတယ်။
နောက် ဆရာတော့် ဒကာ တစ်ဦးထံက ဒီဗီဒီ အလှူခံလို့
ပထမတော့ ကလေးတွေ တီဗီကြည့်ချင်တယ်ပေါ့
ဒီတော့ ဆရာတော်က ဒီစာကျက်၊ ဒီဟာဆိုပေါ့
သင်ပေးချင်တာကို ဇာတ်ကားပြပြီး လုပ်ခိုင်းရတယ်
ဘာသာရေး အယူဝါဒကို သင်တာထက်
အဲဒီကမှ လူကြီးတွေကပါ စိတ်ဝင်စားတော့
အခုဆို တစ်ရွာလုံး ဆရာတော်နဲ့ အဆင်ပြေနေပြီတဲ့
တောင်တန်းဒေသရှိ သာသနာပြုကျောင်းများကို ကထိန်ခင်းမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ကန်နဲ့အတူ အခြား လှူဖွယ်များကိုလဲ ဆက်ကပ်မှာပါ။
ထို့အတူ တောင်တန်းဒေသအတွက် ကထိန်ခင်းရင်းနဲ့
ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့အဖွဲ့က ရွာများမှာလိုအပ်တဲ့ ဆား၊ ဆေး၊ အ၀တ်အစားက အစ
ရသမျှ အလှူခံပြီး ဝေငှပါမယ်။
ရွာရှိလူကုန်ကို မျှတအောင်ဝေသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
တောင်တန်းဒေသမှာ ဘာလိုလဲလို့ မမေးပါနဲ့တဲ့
ကလေးငယ်တွေဆို ကိုယ်တုံးလုံးနေလေ့ရှိပြီး အမျိုးသမီး ၁၆နှစ်အရွယ်တောင်မှ
အချို့ရွာများမှာ အပေါ်ပိုင်း အ၀တ်အစားမပါဘူးလို့ ပြောပြပါတယ်။
ယခု သီတင်းကျွတ်ပြီးလို့ တန်ဆောင်မုန်းလမှာ သွားရောက်လှူဒါန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာရေး ပြန့်ပွားရေးအသင်း ကို ဆက်သွယ်လို့ လှူဒါန်းနိုင်သလို
လှူဒါန်းလိုသူများရှိပါက ကူညီလှူဒါန်း အကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ပါကြောင်း . . . .
Posted by Unknown အချိန် 8:27 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
အရင်ကတော့ ၇၃လမ်းတစ်လျှောက် အများကြီးပဲ
ပရစ်ဈေးကတော့ မနက်ဖြန် ဈေးသွားပြီး စုံစမ်းလိုက်ဦးမယ်ဗျာ
ဒါပေမယ့် စားတော့ ကောင်းသဗျ
လမ်းဘေးကြော်ဆို ပုရစ်အထဲက အညစ်အကြေး မစင်သလိုပဲ .. . .
ကဲ နောက်နေ့မှ ပရစ်ကြော် ဈေး စုံစမ်းပြီး ပြောမယ်ဗျာ
Posted by Unknown အချိန် 7:15 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေးမြို့အနှစ် တစ်ရာ့ငါးဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်
ပုံတင်တာ ပုံပါ မသွားလို့
ဆိုးလိုက်တဲ့ ကွန်နက်ရှင်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 3:30 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေးမြို့အနှစ် တစ်ရာ့ငါးဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် မျက်နှာဖုံး
Posted by Unknown အချိန် 3:22 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေးမြို့အနှစ် တစ်ရာ့ငါးဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် ထွက်ပြီ
မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့မှ ထုတ်ဝေသော
မန္တလေးမြို့အနှစ် တစ်ရာ့ငါးဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
မျက်နှာဖုံးတွင် ရတနာပုံခေတ် ဒေါင်းဒင်္ဂါးနှင့်အတူ
ပဉ္စမ သံဂါယနာတင် ကျောက်စာဂူ
စာရေးဆရာ ၁၈ဦးတို့ရဲ့ ဆောင်းပါး ၁၈ပုဒ် ပါဝင်ပါတယ်။
မန္တလေး နှစ်၁၅၀ပြည့်မည့် ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၁ ခုနှစ်ကို
ကြိုဆိုရင်း မကြာမီ နှစ်တစ်ရာ့ငါးပြည့်ပွဲတော် ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာမည်ကို မျှော်လင့်လျက်
Posted by Unknown အချိန် 3:02 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေးတက္ကသိုလ် နှစ် ၅၀ပြည့် ရွှေရတု သဘင် ကျင်းပမည်
၁၉၅၈ခုနှစ်က စတင်ခဲ့သည့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကြီး ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ နှစ်ငါးပြည့်
ရွှေရတုကာလကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ရွှေရတုသဘင်ကိုလဲ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ
ကျင်းပရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း . . .
Posted by Unknown အချိန် 6:46 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေးတက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာန ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်မည်
မန္တလေးတက္ကသိုလ် သမိုင်းဘာသာအဓိက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ၏
စတုတ္ထအကြိမ်အာစရိယပူဇော်ပွဲကို ၂၀၀၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၉ရက် မွန်းလွဲ ၁နာရီ၌
မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
မန္တလေးတက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာန၏ နေ့သင်တန်း၊ ညနေသင်တန်း၊ စာပေးစာယူ၊
အဝေးသင်စသည့် သင်တန်းများတွင် ပညာသင်ယူခဲ့သော သမိုင်းကျောင်းသား၊
ကျောင်းသူဟောင်းများကို ဖိတ်ခေါ်စုစည်းလျက်ရှိပါတယ်။ အာစရိယပူဇော်ပွဲအနေနဲ့
ကွယ်လွန်သူဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများကို ရည်စူးပြီး သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များအား
ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းမယ်။ အသက် ၆၀အထက် ကန်တော့ခံ ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီး ၂၃ဦး၊
အသက် ၆၈နှစ်အထက် ကန်တော့ခံ ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီး၂၄ဦးတို့ကို ပူဇော်ကန်တော့မှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ညနေပိုင်းမှာတော့ အမှတ်တရ မိတ်ဆုံစားပွဲ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ် ။
စတုတ္ထအကြိမ် မန္တလေးတက္ကသိုလ် သမိုင်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ၏
အာစရိယပူဇော်ပွဲကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းမည်ဆိုပါက ဒေါက်တာစိုင်းနော်ခေး
၀၉-၅၁၃၆၈၈၁၊ ဒေါက်တာ မောင်ချို ၀၉-၂၀၂၉၃၇၀၊ ဒေါက်တာရီရီဝင်း ၀၉-၂၀၀၁၂၂၄
စသည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများနှင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း . . .
Posted by Unknown အချိန် 6:44 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်များ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ဆီမီးပူဇော်မည်
စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်များရဲ့ နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်နေကြအတိုင်း
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ညပိုင်း အောင်တော်မူဘုရား နှစ်ကျိတ်ရှစ်ဆူ ဓမ္မာရုံရှေ့မှာ ဆီမီးပူဇော်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ပိုင်း ၁၀နာရီခန့်က စပြီး ဆီမီးခွက်များ နေရာချထားခြင်း၊ ပုံဖော်ခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီး
ညပိုင်း ၇နာရီခန့်မှာ မီးစတင်ပူဇော်ပါ့မယ်။
ယခင်စတင်ခဲ့စဉ်ကတော့ ဆီမီး ထွန်းခဲ့သော်လည်း
နောက်ပိုင်း ဆီမီးထွန်းရာမှာ အောက်ခံကြွေပြား ညစ်ပတ်ခြင်း၊ ခြေချော်ခြင်းများကြောင့်
ဖယောင်းတိုင် ၂၀၀၀ ၀ယ်ပါ့မယ်
ထပ်မံပါဝင်လှူဒါန်းကြသူများနဲ့ဆိုရင် ဆီမီး ၃၀၀၀ကျော်ဖြစ်ပါ့မယ်။
ရရှိထားတဲ့ နေရာ အကျယ်အ၀န်းအရ ဆီမီး ၃၀၀၀ခန့်သာ လှူဒါန်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့မှာ နံနက်ပိုင်း သံဃာတော် ၄၅၀ကျော်ကို စေတနာရှင်တစ်ဦးကိုယ်စား အရုဏ်ဆွမ်းကပ်ဖို့လဲ စီစဉ်ထားပါတယ်။
အဲဒီနေ့မှာပဲ ကြွရောက်လာတဲ့ သာမဏေ(ကိုရင်)များကို သင်္ကန်း တစ်စုံ ၅၀၀၀တန် တစ်စုံစီ လှူဒါန်းဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 2:12 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ရဟန်းတို့ ငါဘုရားအား လုပ်ကျွေးပြုစုလိုသော
ရဟန်းသည် နာမကျန်းဖြစ်နေသော ရဟန်းအား
ဆိုတဲ့ ဘုရားရှင်၏ ဆန္ဒတော်အတိုင်း နာမကျန်းဖြစ်နေသော
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ပရောဂျက်ကို စတင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၆ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးအဖွဲ့ခွဲအနေနဲ့
သက်တမ်း နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ပရောဂျက်တစ်ခု အောင်မြင်လို့
PLHIV များအတွက် ၀ိပဿနာ တစ်ရက်စခန်း ဖွင့်ပေးခြင်း
ပရောဂျက်လုပ်ငန်းများကို အဓိက ထားသော်လည်း
တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်များဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၁၉လမ်း၊ နန်းရှေ့၊ မန္တလေးမြို့
ဖုန်း ၀၂-၃၉၈၅၅ လိုင်းခွဲ ၈၀၅ ကိုဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် . . .
Posted by Unknown အချိန် 2:01 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
78 shopping center မှာ Lucky Bird ရဲ့ TOSHIBA notebook နဲ့ ပရိုဂျက်တာများ အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
တိုရှီဘာ အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲမှာ ပလန်ဘီရဲ့ ကိုရီးယားရုပ်တူ ပြိုင်ပွဲဝင်များက အားဖြည့်လို့ ပရိုမိုးရှင်းရှိုး လျှောက်ပေးကြပါတယ်။
တိုရီဘာရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ notebook နဲ့ ပရိုဂျက်တာများ ကို ပြသထားပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူများနဲ့
ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ငွေကျပ်ခုနှစ်သောင်း လျော့ထားတဲ့အပြင် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများလဲ
တိုရှီဘာ Notebook များက ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ တိုရှီဘာ ဆားဗစ်စင်တာများမှာ ၀င်ရောက်ပြုပြင်နိုင်တဲ့
ဂလိုဘယ်ဆားဗစ်ပါဝင်ကြောင်းနဲ့ မန္တလေးမှာ လူကြိုက်များတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းလဲ သိရပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 9:39 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေးဂျီတီအိုင် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်
မန္တလေး ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့
အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပရေး အစည်းအဝေးနဲ့ အလှူငွေ ပေးအပ်ပွဲကို
စက်တင်ဘာ ၁၃ရက် မွန်းလွဲ ၂နာရီခွဲက ၀ိဇိတာရာမကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပပါတယ်။
မန္တလေးဂျီတီအိုင်အနေနဲ့ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ ရွှေရတု အခမ်းအနားကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရွှေရတုကာလအတွင်း မန္တလေးဂျီတီအိုင်မှာ သင်ကြားခဲ့ပြီး ပင်စင်ယူပြီးသွားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ
၆၂ဦးကို ၃၀-၁၁-၂၀၀၈ရက်နေ့၊ နံနက်၈နာရီမှာ မဟာဝိဇိတာရုံကျောင်းတိုက်မှာ အာစရိယ ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးဂျီတီအိုင်ကနေ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများအနေနဲ့အောက်ပါကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများနဲ့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန် - ဦးမြင့်လွင် ၀၉-၅၀၀၅၂၅၂
နေပြည်တော် - ဦးစိုးဝင်းသန်း ၀၅၇-၄၁၄၁၄၁
မန္တလေး - ဦးမောင်မောင် ၀၂-၃၁၈၄၆
ရွှေဘို - ဦးစန်းဝေ ၀၉-၂၁၀၀၄၃၄
မုံရွာ - ဦးခင်မောင်တင့် ၀၉-၂၁၃၀၇၀၉
တောင်ငူ - ဦးလှမြင့် ၀၉-၅၃၄၀၆၈၃
ကျောက်ဖြူ - ဦးသန်းညွန့် ၀၉-၈၅၅၃၂၂၁
အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့်အတူ အမှတ်တရ မဂ္ဂဇင်းကိုလည်း ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မန္တလေး ဂျီတီအိုင်နေရာမှာ ယခု ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။
မန္တလေးဂျီတီအိုင်အစား နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)အဖြစ် အိုးဘိုမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတယ် လို့လဲ သိရပါတယ်။
မန္တလေး ဂျီတီအိုင်ကျောင်းဆင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများအနေနဲ့ ဆရာများကို ကန်တော့ရင်း ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆုံတွေ့ကြဖို့ ပူဇော်ပွဲ အမီ ရောက်ရှိဖို့လဲ နှိုးဆော်ထားသလို အလှူငွေများ ရရှိရေးအတွက်လည်း ပါဝင်လှူဒါန်းကြဖို့ အာစရိယပူဇော်ကျင်းပရေးအဖွဲ့က တိုက်တွန်းထားပါတယ် . . .
Posted by Unknown အချိန် 9:37 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဒီကနေ့ အလှူပြုကြတဲ့ နေရာတစ်ခုကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်တန်းဒေသမှာ သာသနာပြုနေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအတွက်
ကထိန်သင်္ကန်းနဲ့ ဆားပိသာ ၉၄၃ပိသာ လှူဒါန်းပွဲပါ။
ဗုဒဘာသာ သာသနာပြန့်ပွားရေးအသင်း တည်ရာ တောင်စလင်းတိုက်သစ်၊ ဘာဝနာဌာနမှာ ကျင်းပတဲ့ ပွဲပါ။
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ တိက္ခ ကိုယ်တိုင် ကြွရောက် ရေစက်ချ တရားဟောကြားပြီး လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဆရာတော်က ချင်းတောင်းတန်းပေါ်မှာ သာသနာပြုရတာ ခက်ခဲပုံ၊ ချင်းတောင်းတန်းမှာ သာသနာပြုရန် လိုအပ်မှုတွေ
ဆရာတော်တို့ရဲ့ အဖွဲက ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အကြောင်းများကို ဟောကြားချီးမြှင့်ပါတယ်။
သာသနာပြုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှဝင်းကလဲ ထပ်ဆင့်လို့ အလှူကိစ္စ အ၀၀ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။
ဒီနှစ် ကထိန်ရာသီမှာ တောင်တန်းသာသနာပြုကျောင်း ၃၁၀မှာ ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူမယ်လို့ သိရပါတယ်။
တောင်တန်းဒေသ သာသနာ ပြန့်ပွားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ သံဃာတော်များအတွက်
ဂွမ်းကပ်စောင်၊ အခင်း၊ အစားအစာခက်ခဲသော ချင်းတောင်တန်းဒေသ သာသနာပြုများအတွက် ငါးသေတ္တာမှ အစ
အစစ အရာရာ အလှူခံလျက်ရှိပါတယ်။
သင်္ကန်း တစ်စုံ ၇၀၀၀ကျပ်
ဂွမ်းကပ် တစ်ထည် ၂၅၀၀ကျပ်( လှူဒါန်းထားတဲ့ ချည်စ၊ အ၀တ်စအဟောင်းများကို ဂွမ်းဖတ်ပြုလုပ်ပြီး အပေါ်အုပ်အ၀တ်စ၊ ချုပ်ခလုပ်အားခသာ)
ကော်ဇော်အခင်း တစ်ထည် ၁၀၀၀၀ကျပ်/၈၃၀၀ကျပ်
တောင်တန်းဒေသရှိ ကျေးရွာများမှာ သာသနာပြု ရဟန်းတော်များက တစ်ဆင့် လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့
အ၀တ်အထည်၊ ဆား စသည့် ပစ္စည်းများကိုလည်း ခွဲဝေ လှူဒါန်းသွားဦးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးနဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ တို့ရဲ့ မိန်းကြား၊ ပြောကြားချက်များကို နောက်နေ့မှ သက်သက် ပြောပြပါဦးမယ်။
အခုတော့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် မေဃဂီရိရပ်ကွက်ထဲက ကလျာဏကာရီ နာမှုကူညီရေးအသင်း၊ သွေးလှူရှင်အသင်းနဲ့ ရပ်မိရပ်ဖများရဲ့ အလှူကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ်မိကြောင်း . . .
Posted by Unknown အချိန် 1:53 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မနေ့ည ၈နာရီလောက်ကမှ ဆြာဘနဲ့ အမေရှင် ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ အကြောင်း ပြောဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်မေရှင် ဆုံးပြီတဲ့ သိလိုက်ရပါတယ်။
မေးကြည့်တော့ ၁၁နာရီ၂၀က ဆုံးတယ်တဲ့
အရင်က အမေရှင် အိမ် သွားတိုင်းတဲ့
အမေရှင်ရဲ့ သီချင်းဆိုပြတဲ့ အသံကို ကြားမိတယ်တဲ့
တွေ့ရင် မမောနိုင် မပန်းနိုင်
အရင်က သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းများကို အမေရှင်က ပြန်ဆိုပြလေ့ရှိတာ
အမေ့ဆီ ရောက်ဖူးသူတိုင်း အမှတ်တရ ဖြစ်နေမှာပါ . . . .
အမေရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ အမေရဲ့ အနုပညာများကတော့ ဘယ်သောအခါမှ မသေနိုင်တော့ပါ . . .
အမေရှင်ရဲ့ အကြောင်းကို အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တော့ ဒီလိုတွေ့ပါတယ်
မိဘနာမယ် ကွာလွဲချက်တော့ ရှိနေပါတယ်။
May Shin (born March 10, 1917) isaBurmese actress and singer.
She was born in 1917-03-10 at Mandaly, Mandalay Division. She is daughter of U Khin Lay and Daw Pwa Yon. She passed seventh grade from Watsaliyan School. In 1936 she joined with Ragoon A1 Film Company and she started acting. Her first film is Phu Sar Shin and in that film actor is Ye Kaung Chit Swe. She was successful in the first Myanmar audio film Mya Nat Maung. She was also noted for her singing. She lived in Yadanar House, Mya Sandar brach street, 26-B street, Between 62 street and 63 street, Aung Taw Mu Ward, Mandalay.
Phu Sar Shin
Mya Nat Maung
Chit Ta Mya
Chit Ye Sin
Saung Taw Shin
Chain Tan Pyi
Mae Twat Tar
Shin Thi Wa Li
Pyo Mar tan
Taw Tar Ngwe Min
Kyay Say Ta Man
Chit Khat Thet Lyar
Posted by Unknown အချိန် 7:21 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ၀ဏ္ဏကျော်ထင် ဒေါ်မေရှင် ကွယ်လွန်
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ၀ဏ္ဏကျော်ထင် ဒေါ်မေရှင်သည်
၃-၉-၂၀၀၈ ည ၁၁နာရီ မိနစ်၂၀က ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် အထူးဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း။
Blog Day 2008 ဒုတိယအကြိမ် ကျင်းပ နိုင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာ
Blog Day 2008 ဒုတိယအကြိမ် ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အစစ အရာရာ ပါဝင် ကူညီ ဆောင်ရွက် ကြပါသော
ဆရာဦးလှကောင်း၊ မန္တလေးများ ဘလော့ကာများ၊ ဧရိပ်မွန် အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အလှူငွေ ပါဝင်လှူဒါန်းကြသူများ၊
မန္တလေးမှ စာနယ်ဇင်းဆရာ၊ ဆရာမများ အားလုံးနှင့်ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများအားလုံး ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့်
တတိယအကြိမ်အဖြစ် နောက်နှစ် ၂၀၀၉ခုနှစ် သြဂုတ် ၃၁ရက်မှာ ဒီထက် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပနိုင်ဖို့ ဆုမွန်တောင်းလိုက်ရပါကြောင်း . . .
Posted by Unknown အချိန် 4:28 PM4comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
Blog Day 2008 အထိမ်းအမှတ် ဒါနပြုပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး
မန္တလေး ဘလော့ကာများမှ ပေါင်းစု ကျင်းပသော Blog Day 2008 အထိမ်းအမှတ် ဒါနပြုပွဲကို
ယနေ့ (၃၁-၈-၂၀၀၈) ဘလော့ဒေးတွင် မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်ရှိ ဧရိပ်မွန်အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေး ကျောင်းတွင် ယနေ့နံနက် ၉နာရီခွဲ ကျင်းပသည်။
ဒါနပြုပွဲကျင်းပရာသို့ မန္တလေးရှိ ဘလော့ကာများ၊ စာနယ်ဇင်းများမှ ဖိတ်ကြားထားသူများ၊ ဧရိပ်မွန်အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းမှဒေါ်ဓမ္မေသီနှင့်ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်တင်တင်လှနှင့်ကျောင်းသူ ကလေးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာပြီး ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်တင်တင်လှမှ မိတ်ဆက်စကားပြောကြားသည်။ ယင်းနောက် ဘလော့ကာများက တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်စကားပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပညာဒါနပြုပွဲအဖြစ် ဧရိပ်မွန်အမျိုးသမီးကျောင်းရှိ သမီးငယ်များအား ဆရာဦးလှကောင်းက ICT and Education ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘလော့ကာ မရတနာချိုက လွယ်ကူလေ့လာ အင်တာနက်ကမ္ဘာခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘလော့ကာ ဦးထိပ်က မီဒီယာနှင့်ဘလော့ကာ အကြောင်းကိုလည်းကောင်း အသီးသီး ပညာဒါနပြု ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် မန္တလေးစာနယ်ဇင်း ဆရာများကိုယ်စား ဘလော့ဒေးအထိမ်းအမှတ် ဒါနပြုပွဲ တက်ရောက်ရခြင်းအတွက် ရင်တွင်းခံစားချက်များကို ဆရာသင့်နော်နှင့်ဆရာညီပုလေးတို့မှ ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ဘလော့ကာများစုပေါင်း၍ ကောက်ခံရရှိသော အလှူငွေမှ ငွေကျပ် ငါးသောင်းအား ဧရိပ်မွန်အမျိုးသမီးကျောင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်တင်တင်လှသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းသည်။ ကျန်အလှူငွေများအား ကွန်ပျူတာခန်းအတွင်း လိုအပ်သော ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ စာအုပ်များ၊ စီဒီများဝယ်ယူ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းနောက် မန္တလေးစာနယ်ဇင်း လူမှုကူညီရေးအတွက် ဘလော့ကာများမှ အလှူငွေ ကျပ်တစ်သောင်းပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by Unknown အချိန် 4:28 PM2comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ပြင်ဦးလွင်-မန္တလေး လိုင်းကား မှောက်၊ သုံးဦးသေဆုံး
မနေ့ ပြင်ဦးလွင်က အပြန် လိုင်းကား ဟိုင်းလတ် တစ်စီး မှောက်တယ်လို့ ကြားပါတယ် . . သုံးဦးသေဆုံးပြီး ဒဏ်ရာရသူများတယ်လို့လဲ ကြားသိရပါတယ် ညက အိုပီတီ နားမှာ ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ သူက ပြောပြတာပါ
ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ကြည့်ရှုရခြင်းမရှိသေးပါဘူး . . .
Posted by Unknown အချိန် 1:07 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
Posted by Unknown အချိန် 7:33 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဘလော့ဒေးအထိမ်းအမှတ် ဒါနပြုပွဲအဖြစ် မန္တလေးရှိ ဘလော့ကာများက
ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများ သည် လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ အောက်ပါ အီးမေးလ် များမှသော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
မန္တလေးရှိ အိုင်စီတီပညာရှင်များ၊ ဘလော့ စိတ်ဝင်စားသူများ၊ ဘလော့ကာများ၊
လှူဒါန်းလိုသူများအားလုံးကိုလည်း အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် - ၃၁-၈-၂၀၀၈
အချိန် - နံနက် ၉နာရီမှ ၁၁း၃၀နာရီ
နေရာ - ဧရိပ်မွန် အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း
အီးမေးလ်ကနေ ပို့စ်တင်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်
ဘလော့ဒေး အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေမှဗျာ
မှာ ဘလော့ဒေး အတွက် အထိထမ်းအမှတ် တင်ထားပါတယ်
ဘလော့ဒေးအထိမ်းအမှတ် ကုသိုလ်ဒါနပြုပွဲတစ်ခု ကျင်းပဖို့
မနေ့က အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ် . .
၃၁-၈-၂၀၀၈ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် Blog Day 2008 မှာ
စတဲ့ ဒါနအပေါင်းစုပြီး ကုသိုလ်အမှုပြုကြပါမယ်။
ဒါကြောင့် ဘလော့ဒေးနေ့မှာ ဘလော့ကာများကိုယ်တိုင် ပါဝင်လို့
တတ်နိုင်သမျှ နည်းများမဆို အလှူငွေဒါန ပြုပြု
ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ပါဝင်ဒါန ပြုသည်ဖြစ်စေ
ရတနာချို၊ ဆြာဘနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ထံကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို ဒါနပြုကြမယ်ဆိုတာကတော့ အနီးကပ်မှာ
အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြောင့် ဟောပြောပွဲမျိုး၊ ဆွေးနွေးပွဲမျိုး မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်
အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အကျိုးရှိတဲ့ ပွဲလေးတစ်ခုတော့ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့
ရည်ရွယ်ပြီး ဒီ ဒါနပြုပွဲလေးကို ကျင်းပဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါ။
အားလုံး ဘလော့ကာဟုတ်သည့်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ
ကျွန်တော်တို့ ဒါနပြုပွဲ တနည်း ဘလော့ကာတို့ရဲ့ ဒါနပွဲလေးမှာ
ပါဝင်လှူဒါန်း အားဖြည့်ပေးကြပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 6:08 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဘလော့ဒေး အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပဖို့အတွက်
မန္တလေးမှာရှိတဲ့ မိဘမဲ့စောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း တစ်ခုခုမှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေကြပါတယ်။
ပညာဒါနအဖြစ် တတ်မြောက်တဲ့ ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ များကို သင်ပြပေးကြပါမယ်။
နောက် အလှူငွေ ပေးအပ်လှူဒါန်းပါ့မယ်
ဘယ်နေရာဆိုတာ မနက်ဖြန်လောက်ဆို အတည်ပြုနိုင်ပြီ လို့ ထင်ပါတယ်။
မိဘမဲ့ ကလေးများကိုလဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်လှူဒါန်းကြပါတယ် . . .
Posted by Unknown အချိန် 6:05 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
Posted by Unknown အချိန် 6:00 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ကနေ့ညနေ ၇နာရီလောက်က ထမင်းစားနေတုန်း ငလျင်တစ်ချက် လှုပ်သွားတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။
ဘေးက အမေကတော့ ခေါင်း အနည်းငယ်မူးသွားပါတယ်။
ဘယ်နေရာကို ဗဟိုပြုတယ်ဆိုတာကတော့ ရှာကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 10:03 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ယနေ့ သြဂုတ်လ ၁၉ရက်နေ့ဟာ ကမ္ဘာဓာတ်ပုံပညာနေ့ပါ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံပညာရပ်ကို အများပြည်သူရှေ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံက ချပြလိုက်တဲ့ နေ့ကို အစွဲပြုလို့
ကမ္ဘာဓာတ်ပုံပညာနေ့ကို သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မန္တလေး ဓာတ်ပုံအသင်းက ဦးစီးလို့
မော်ဒယ်အလှ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့ကို ဂုဏ်ပြုလို့ အမှတ်တရ ရိုက်ကူုးပြိုင်ပွဲဝင်ကြပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြား မော်ဒယ်နှစ်ဦးကို အကြီးတန်းနဲ့ အငယ်တန်းခွဲလို့
ညနေပိုင်းမှာတော့ ပါဝင်ရိုက်ကူးကြတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာများက တစ်ဦး ၃၀၀၀စီနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့ အထိမ်းအမှတ် မိတ်ဆုံစားပွဲကို
ဓာတ်ပုံပညာနေ့ကို ဆင်နွှဲဖြစ်ပါကြောင်း . . .
Posted by Unknown အချိန် 10:40 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ယနေ့ ကတော့ ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ပါ
၀ါခေါင်လပြည့်ကိုတော့ မေတ္တာအခါတော်နေ့လို့ သတ်မှတ်ပြီး
သတ္တ၀ါများအပေါ် မေတ္တာဓာတ်များပေးပို့ ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက် တောင်ပြုံးပွဲ ကနေ့ ပြီးသွားပါပြီ
နောက် ၈ရက်အကြာမှာ ရတနာ့ဂူ နတ်ပွဲ စတင်ပါ့မယ် . . .
Posted by Unknown အချိန် 9:50 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းက မီးဘေးသင့်ခဲ့သော
ဈေးသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ပန္နက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ကြောင်း။
Posted by Unknown အချိန် 10:17 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
Blog Day အထိမ်းအမှတ်ဆောင်းပါး ပါမသွားလို့ . .
Posted by Unknown အချိန် 4:41 PM 1 comment: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မနှစ်က ဘလော့ဒေးမှာ ရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါး ပါ
ဒီနှစ်အတွက်လဲ ကြိုးစားရဦးမယ်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 2:49 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဘလော့ဒေး အထိမ်းအမှတ်နဲ့ မန္တလေးမှာ ဘလော့ကာများစုပြီး မိတ်ဆုံစားပွဲလေးတစ်ခု
မရတနာချိုနဲ့ ဆြာဘတို့ထံက ကြားသိရလို့ အထူးဝမ်းသာမိပါတယ်။
မနှစ်ကလိုပဲ ဆိုက်ဘာကဖေးများမှာ ဘလော့ဒေး အထိမ်းအမှတ်
ဘလော့တည်ဆောက်နည်းများ အခမဲ့ လိုက်လံ သင်ကြားပေးခြင်း၊ ဟောပြောဆွေးနွေးခြင်းများ
မန္တလေးက ဆိုက်ဘာကဖေးများကလဲ ပူးပေါင်းပါဝင်စေချင်ပါတယ်။
ဘလော့ကို တရားဝင် မကျော်မခွပဲ တင်လို့ရတဲ့ ဆိုဒ်များကနေ သရုပ်ပြသွားဖို့
ဘလော့စပေါ့တော့ မပြနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ . . .
ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ဒေး အထိမ်းအမှတ်လေး ကျင်းပနိုင်မယ်ဆိုရင်
၀မ်းသာကျေနပ်မိပါကြောင်း . . .
Posted by Unknown အချိန် 7:05 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဒီတော့ ဘလော့ကို လူတိုင်းကြည့်ရအောင်လို့
အမှန်ကတော့ ဒိုမိန်းလေး ၀ယ်နိုင်ရင် ကောင်းတာပေါ့
မှာလဲ ကျွန်တော့် ဘလော့ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 7:39 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ကနေ့ တောင်ပြုံးပွဲတော် အစနေ့ပါ
မနေ့ ရထားပေါ်မှာ တောင်ပြုံးပွဲတော်သွား
မမ များကို တစီတတန်းကြီးတွေ့လိုက်ရပါသေးတယ် . . .
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘန်းစကားတွေသုံးလို့ ရထားပေါ် ဟိုတွဲကူး ဒီတွဲကူးနဲ့
မိန်းကလေးလား ထင်မှတ်ရတဲ့သူ နှစ်ယောက်သုံးယောက်တောင် တွေ့လိုက်ရပါသေးတယ် . . .
ဧရာဝတီတိုင်းဘက်က တောင်ပြုံးပွဲတော် မလာနိုင်လို့ စည်ကားမှု နည်းမယ်လို့ တချို့က ဆိုပါတယ်။
ပွဲတော်အခြေအနေကတော့ စည်ကားမြဲ စည်ကားမယ်ထင်ပါတယ်
ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ကြမှာပါ . . .
ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ်လဲ တောင်ပြုံးပွဲ သွားဖြစ်ဦးမလား မသိ . . .
လကွယ်နေ့ ပြီးမယ့်ပွဲဆိုတော့ ၈ရက်အတွင်း ရောက်ဖြစ်ရင်တော့ ဓာတ်ပုံလေး ဘာလေး တင်မယ်ဗျာ . .
2008 World Photography Day
အခမ်းအနားလေးများနဲ့ ထည်ဝါစွာ ကျင်းပခွင့်ရရင် ကောင်းမယ်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 6:19 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဘလော့ဒေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆိုဒ် တစ်ခုပါ
တော်တော်ကြာပြီ စောင့်ကြည့်နေတာ လှုပ်ရှားမှုမရှိလို့
ဒီကတော့ သူတို့လဲ ၂၀၀၈ အတွက် ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ
နောက် ကျွန်တော့ ဘလော့က လိုဂို ပြောင်းချင်လိုက်တာ
၂၀၀၈ လိုဂိုလေး ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 6:01 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဘလော့ဒေး အကြောင်းမေးထားတဲ့သူလဲ ရှိတော့
မန္တလေးမှာ မနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့
ပထမအကြိမ် ဘလော့ဒေး အခမ်းအနားကို အမှတ်တရ ပြန်ကြည့်ဖြစ်တော့
ရင်ထဲမှာ ဒီနှစ် ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ဖြစ်ဖို့ ပိုလို့ ပိုလို့ တိုးလားပါတယ်။
မှတ်မိနေပါသေးတယ် . . .
မနှစ်က ဒီလိုအချိန်ဆို အားလုံး အဆင်ပြေအောင် လိုက်ပြီး
စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြရတာကို . . .
သြော် ဒီနှစ်မဖြစ်ခဲ့လဲ နောက်နှစ် ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဗျာ . . .
အချိန်ရှိသမျှတော့ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဦးမယ် . . .
အပြင်မှာ အခမ်းအနား မကျင်းပနိုင်တောင်
ကိုယ့်ဘာသာ ဘလော့မှာ ဘလော့ဒေး အထိမ်းအမှတ်
အထူး ပို့စ်များ တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါမယ် . . .
ဘလော့ဒေး မရောက်ခင် ၁၀ရက်အလိုမှ စတင်ပြီး
ဘလော့ဒေး အထိမ်းအမှတ် အထူးပို့စ်များ တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
Posted by Unknown အချိန် 6:39 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မနေ့က မုံရွာ ဘုတလင်က မောင်းထောင်ရွာကို တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မောင်းထောင်ရွာဆိုတဲ့ စာပေ လေ့လာတဲ့သူတိုင်း
မောင်းထောင်ရွာက ပညာရှင်များ များစွာ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည့်စုံအောင် နောက်နေ့ ကြုံသလို ရေးပါဦးဗျာ . . .
ပျော်ရွှင် ဖွယ် ခရီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 7:20 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေးမိသားစုစကားဝိုင်း ဆိုတဲ့ ဖိုရမ်ကို မန္တလေးမြို့မှာ အခြေစိုက်ပြီး ဖန်တီးထားပါ။
ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခု အဖြစ် အင်တာနက်မှာ မန္တလေးမြို့တော်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ဖြစ်စေ
အခြား အကြောင်းအရာများကိုဖြစ်စေ မိသားစုအသွင် ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ကွန်ပျူတာဌာနရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်လို့ သိရပါတယ်။
ဖိုရမ်မှာ ၀င်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်သလို ကိုယ်တိုင်လဲ ပါဝင်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။
ဖိုရမ်ရဲ့ အမည်လိုပဲ မိသားစုဝင်များအဖြစ် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး
ညီအစ်ကို မောင်နှမ အရင်းအခြာပမာ
ပြောမနာ ဆိုမနာ မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့
အကျိုးရှိအောင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ၀င်ရောက်ရေးသားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 7:07 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
အိုးပုတ်ပွဲတော် ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပွဲတော်ကျင်းပရာ မြောက်ပြင် (သူရဲဈေးအနီး)ကို
သွားရောက်ကြပါဦးလို့ . . .
ယခင်ကတော့ အိုးပုတ်ဝယ်ရင်း တစ်ခုစ တစ်ခုစ ၀ှက်ကြတဲ့ ဓလေ့ရှိတဲ့
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ရိုးရာပွဲတစ်ခု ပါပဲ . . . .
ကိုဇော်မိုးအောင်က တစ်နှစ်က ဘလော့မှာ ရေးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်
ပျော်ပျော်ပါးပါး အိုးပုတ်ဝယ်သွားကြရအောင်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 6:34 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
တောင်သမန်ရှင်းတမ်း ဆိုတော့ ဆရာ မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်)ရဲ့ ဆောင်းပါးလိုလို
တကယ်တော့ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်ထဲက သတင်းကို ကိုယ်တိုင် သွားကြည့်ခဲ့တာလေးပါ။
တောင်သမန်တံတား အ၀င် ရှေးဟောင်းသုတေသနက အသိပေးစာ
နောက် ကွန်ကရိတံတားရဲ့ အလှူမော်ကွန်းကျောက်စာ တံတားလှူတဲ့နှစ် ၁၃၄၅ လို့ပါ ပါတယ်။
နောက် တံတားကျိုးကျတဲ့ နေရာ
နောက် တံတားကျိုးကျတဲ့နေရာနဲ့ ကွန်ကရိတံတား ဆက်စပ်နေတာ
အဓိက ကတော့ တံတား ကျိုးကျတဲ့နေရာနဲ့ ကွန်ကရိတံတား နီးကပ်နေတော့
သတင်းအဖြစ် ရေးချင်ဇော များတဲ့
သတင်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အမှားပေါ့ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 4:59 PM 1 comment: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ တစ်ယောက် ကျန်းမာရေး မကောင်းဘဲ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်ဆိုတာ
မကြာသေးခင်ကမှ ဂျာနယ်ထဲ ဖတ်လိုက်ရပါသေးတယ်။
ဒီကြားထဲလဲ သေပြီလို့ သတင်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်
အခုတော့ တကယ်သေပြီတဲ့ . . .
ဒီနေ့ မနက် ၆နာရီကပဲ သုခကမ္ဘာဆေးခန်းမှာ ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
ဟိုးငယ်စဉ်ကတည်းက စုံထောက်ဝတ္ထု ဖြစ်တဲ့ ဆားပုလင်း နှင်းမောင် ၀တ္ထုတွေ
နောက် လျှို့ဝှက်သဲဖို ၀တ္ထု များကို နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။
ဗေဒင်ပညာရှင်တစ်ဦး ဝေဒပညာရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့လဲ လေးစားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပညာရပ်တစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ တတ်ကျွမ်းသူ တစ်ဦး
Posted by Unknown အချိန် 3:42 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဖိုးချစ်ရဲ့ ကမ္ဘာကျော် နှစ်ပါး လက်မှတ်ထိုးပွဲ ကျင်းပ
ဖိုးချစ်ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်နှစ်ပါး အမှတ်တရ လက်မှတ်ထိုးပွဲကို
78 မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ကနေ့ နံနက် ၁၀နာရီက စတင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သွားချင်သော်လည်း အခြားကိစ္စရှိနေတော့ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး . . .
ဆြာဘ တော့ ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူ့ဘလော့မှာ ပုံတင်မယ်ထင်ပါ့ . . .
Posted by Unknown အချိန် 6:52 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ရဲ့ ၁၁ ကြိမ်မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ရဲ့ ၁၁ ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် ကျင်းပနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁ ကြိမ် မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရဲ့ ဘွဲ့ယူမောင်မယ်များစုပေါင်းပြီး
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရသူများအတွက် လှူဒါန်းသွားဖို့ အလှူခံလျက်ရှိတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 6:42 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား ရွှေထီးတော်တင် မင်္ဂလာ ကျင်းပ
မန္တလေးမြို့ရဲ့ ဆုတောင်းပြည့်၊ ဆုတောင်းရ ဆိုပြီး တောင်ပြင်မှာ တည်ရှိတဲ့ ဘုရားနှစ်ဆူထဲက
ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားရဲ့ ရွှေထီးတော်၊ စိန်ဖူးတော်၊ ငှက်မြတ်နားတော် တင်လှူပွဲပါ။
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပပြီး အကြိုတရားပွဲများ၊ အောင်ပွဲ တရားပွဲများ၊ တေးဂီတ၊ အငြိမ့်၊ ဇာတ်သဘင် ဖျော်ဖြေမှုများနဲ့
ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပ လျက်ရှိပါတယ်။
ယနေ့တော့ ရွှေထီးတော်တင်လှူတဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်
ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ ကြာဆံကြော် စသဖြင့် စတုဒီသာ ကျွေးမွေးကုသိုလ်ယူကြပါတယ်။
အောင်ပွဲအဖြစ် တရားပွဲနဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ဆက်ဦးမှာပါ . . .
Posted by Unknown အချိန် 6:09 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်း အလွန် ဒုက္ခ ရောက်ပါတယ်။
ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေး ဘယ်လို ပုံထွက်လဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဘလော့မှာ ပြန်ဖတ်ချင်တာပေါ့ဗျာ
ဒါပေမယ့် တော်တော် ကြိုးစားဖတ်နေရတယ်
နောက်တစ်ခု အဲလို ဖတ်လို့ရတဲ့အခါကျတော့လဲ
ကျွန်တော်တော့ မှာ cbox ၀င်ရေးလို့မရဘူးဗျာ
ရေးချင်ရင် ကိုယ့် cbox မှာပဲ ကိုယ်ရေးခွင့်ရှိတယ်
ကျွန်တော် လျှောက်ကြည့်ဖြစ်သမျှ ဘလော့တွေမှာ ၀င်ရေးလို့မဖြစ်
၀င်ရေးချင်ရင် သူတို့ရဲ့ cbox လိပ်စာ သိမှ ဖြစ်နေတယ်
စိတ်လဲ ညစ်ပါ့ . . .
ကြည့်ဖြစ်သမျှ ဖတ်ဖြစ်သမျှ ခံစားရသမျှ ဘာမှ ၀င်ရေးခွင့်မရ . . . .
cbox ၀င်ရေးလို့ ရတာများ သိကြရင် ပြောပြကြပါဦးဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 5:31 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ကားကြီး မိုးပေါ် ဘီးထောင်ခြင်း
မနေ့ညကပေါ့ ည ၁နာရီကျော်ကျော်လောက်
အိမ်ရှေ့ က အစ်ကို အစ်ကို ကို. ......................... ဆိုပြီး
ရပ်ကွက် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ က
ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ ၃၅လမ်းမှာ ကားမှောက်လို့
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပေးပါတဲ့ (ကျွန်တော်က ကင်မရာနဲ့ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်ရိုက်တတ်တာ သိနေကြတာကိုး)
ရောက်တော့ ကားက ပက်လတ်လန်လို့ . . .
ဘီး တစ်ဖက်က ပြုတ်တောင်နေတယ်
ကားခေါင်းက လမ်းဘေးက အိမ်ထဲရောက်နေတယ်
သစ်ပင် နှစ်ပင် အမြစ်လန်နေတယ်
ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း မေးကြည့်တော့ တစ်ယောက်ပွဲချင်းပြီး သေတယ်တဲ့
ဆိုင်ကယ်ရှောင်လိုက်တာ လို့လဲ ပြောတယ်
တစ်ယောက်က ဘွဲ့ ယူဖို့ လာတယ်ဆိုပဲ
နယ်က လို့လဲ ပြောတယ်
ဘာမှ မတိကျ ဘူးမပြောနဲ့ ဗျ
ဘလော့ဆိုပေမယ့် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်တော့ ညီမှ ဖြစ်မယ်
ဓာတ်ပုံလဲ တင်ထားလိုက်မယ် ကားနံပါတ်တော့ ဖျောက်လိုက်ဦးမယ် . . .
Posted by Unknown အချိန် 3:46 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
အိုလံပစ်ပွဲတော်နီးကပ်လာပါပြီ . . .
July Dream ရဲ့
ပို့စ်လေးကို ကြိုက်လို့ ညွှန်းလိုက်ချင်ပါတယ် . . .
ဘလော့ဒေး မရောက်ခင် ရောက်မှာကတော့ ကမ္ဘာ့ ဓာတ်ပုံပညာနေ့ပါပဲ . . .
သြဂုတ်လ ၁၉ရက်နေ့ မှာ ကျရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် . . .
ဓာတ်ပုံနဲ့ ထိတွေ့မှု မရှိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ . . .
ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်တရများကို ဓာတ်ပုံနဲ့ မှတ်တမ်းတင်လာကြတာ
နှစ်ပေါင်း များစွာကြာနေပါပြီ . . . .
ဒီနှစ် ဓာတ်ပုံပညာနေ့ မှာ ဘာတွေ လုပ်ကြဦးမလဲ ဆိုတာကတော့
ဓာတ်ပုံချစ်သူများကို စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါပဲ . . .
ဒါကတော့ မနှစ်က ဓာတ်ပုံချစ်သူများစုစည်းတင်ထားတဲ့
ဓာတ်ပုံပညာနေ့ အထိမ်းအမှတ် နေရာလေးပေါ့ . . .
Posted by Unknown အချိန် 5:42 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဘလော့ဒေး( Blog Day) ရောက်တော့မယ်
၂၀၀၈ခုနှစ်အတွက် ဘလော့ဒေး မကြာခင် ရောက်တော့မယ်ဗျာ . . .
မနှစ်ကတော့ မန္တလေးမှာ ဘလော့ကာတွေ စုပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး မလုပ်တတ် လုပ်တတ် နဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခု ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွက် ဘလော့ဒေး ကျင်းပဖို ဘယ်လိုများ ရှိကြလဲ မသိဘူးဗျာ
ကျွန်တော်ကတော့ အလွန် ဖြစ်စေချင်ပါတယ် . . .
ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးလုပ်ခဲ့ရတာ . . .
ကိုစစ်ကိုင်းကြီးကိုလဲ လွမ်းလိုက်တာ . . .
မနှစ်က အမ်အိုင်စီတီ(ရတနာပုံဈေး) ရှိတော့
ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း(မန္တလေးတိုင်း)က ထောက်ပံ့ပြီး နေရာရှာပေးတာ . . .
အခုတော့ နေရာက အလွယ်တကူမရှိ . . .
ဘလော့ဒေး ဖြစ်အောင်ကျင်းပချင်ပါတယ် . . .
အားလုံးပဲ ဘလော့ဒေးအထိမ်းအမှတ် တစ်စုံတစ်ခု ပြုလုပ်ဖြစ်အောင်လို့
ဘလော့ကာတွေ ဆုံကြဦးစို့ဗျာ . . .
၃၀-၈-၂၀၀၈ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ဘလော့ဒေးကို
ကြိုဆိုရင်း . . .
ဘလော့ဒေး အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတစ်ခု ကျင်းပဖို့အတွက်
ကူညီမယ့်သူများ ၀ိုင်းဝန်းပေးကြပါဦးဗျာ . . .
အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းခဲ့ကြသူများ ပြန်လည်ဆုံဆည်းရအောင်ဗျာ . . . .
Posted by Unknown အချိန် 4:35 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်ရဲ့ တောင်သမန် ဇာတ်လမ်းကို
ပြန်လည်ဖြေရှင်းတဲ့ စာတွေပါတဲ့ ဂျာနယ်မှာပဲ . . .
မဟာမုနိဘုရားထဲက ကြေးရုပ်ကြီးတွေကိုရေးထားတယ် . . .
လူရုပ်တွေရဲ့ အတိုင်းအတာကို ၇လက်မ
ဘာကိုများ တိုင်းလာလဲတော့မသိ . . .
သြော် လျှပ်တပြက်ရယ် . . .
တောင်သမန် ကွန်ကရစ်အစားထိုးတာက မဟုတ်မှန်ကြောင်း
ဖြေရှင်းချက် ပြန်လည်ဖော်ပြပြီးပါပြီ . .
အဲဒီစာရေးသူပဲ . .
ထပ်မံပြီး အမှားတွေ ရေးထားတာပါပဲ . . .
ဖွတာလား တော့ မသိ . . ..
Posted by Unknown အချိန် 4:01 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
သတင်း နှင့် သတင်း
မနက်က ဆွမ်းကျွေးသွားရင် တွေ့လို့ ကောက်ဖတ်တာ
ဖတ်လိုက်ရကတည်းက တော်တော် ဒေါသဖြစ်နေတာ
၂။ သတင်းသုံးသူ တွေကိုပေါ့ . . .
သတင်းပေးပို့ သူအနေနဲ့ ဦးပိန်တံတား ရောက်ဖူးရဲ့လားမသိ . . .
ဦးပိန်တံတားရဲ့ တစ်နေရာက ချောင်းဖြတ်စီးဆင်းတဲ့နေရာကို သံကူကွန်ကရစ် တံတားတစ်ခု အစားထိုးထည့်ထားတာ ကျွန်တော့်အထင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော်ပြီ ထင်ပါတယ်။
၁၉၈၄ခုနှစ် ၀န်းကျင်ခန့်က ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဆိုပါတံတားနေရာကို အုတ်အစားထိုးတာ . . .
ယခု ဒီနှစ် အတက်နေ့က ကျိုးကျတဲ့တံတားကို ပြုပြင်ပြီးတဲ့အချိန်
ဦးပိန်တံတားကို ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ် . . .
သစ်သားနဲ့ ပြန်လည် အစားထိုးပြုပြင်ထားတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်.
မှတ်ချက်။ ယခုအချိန်မှာ ဘာနဲ့ ပြင်ထားမလဲတော့ မပြောတတ်ပေမယ့် ပုံထဲမှာပါတာကတော့ ယခင်က တံတားဟောင်းကြီးပါ။
ကိုယ်က ကာလာသုံးပြီး ထိထိမိမိဖော်ပြမည့် သတင်းတစ်ပုဒ်ကို စိစစ်မှုမလုပ်ဘူးလား . . . .
နားမလည်တော့ပါ . . . .
သတင်းဖတ်ပြီး တော်တော် စိတ်လေသွားပါတယ် . .
တခြားသူရဲ့ စိတ်ကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် . . .
CMS ရဲ့ ဘလော့မှာ တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်ကို ကနေ့ ဖတ်မိတော့
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဂျာနယ်ကို ကနေ့ ဖတ်ထားမိတော့ . . .
ဟုတ်မဟုတ် ဆုံးဖြတ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ . . .
သတင်း . . . . .
Posted by Unknown အချိန် 7:12 PM2comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ကနေ့ကတော့ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ ဖြစ်တာနဲ့အညီပဲ
နံနက်ပိုင်းမှာ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ် ဆွမ်းကျွေးများ နေရာအနှံ့ ကျင်းပနေကြပါတယ်။
အိမ်မှာ ကျင်းပကြပြီး မိသားစု နားရက်ဖြစ်တာကြောင့်
မန္တလေးတောင်မှ သည် ဘုရားဖူးခြင်း၊ မိသားစု အနားယူ အပန်းဖြေနေရာများသွားခြင်း များ
ရုပ်ရှင်ရုံများလဲ စည်ကားလို့နေပါတယ် . . .
၀ါဆိုပွဲ ရှိပါတယ် . . .
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကနေ ၀ါဆိုရန်စီစဉ်နေကြသော သံဃာတော်များက
တကာ၊ တကာမတို့ကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးမှုအစီအစဉ်များနဲ့ ပြန်လည် ဧည့်ခံမှာဖြစ်ပါတယ် . . .
ဘုရားကြီးတစ်ဝိုက်မှာဆို နံနက်ပိုင်းကတည်းက စည်းကားလျက်ရှိနေတတ်ပါတယ် . . .
Posted by Unknown အချိန် 6:49 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဧရာဝတီ မြစ် ကြီးက မန္တလေးရဲ့ အနောက်ဘက်မှာစီးဆင်းလို့ . . . .
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ဖြတ်လို့ တံတားကြီး နှစ်စင်းလဲ ထိုးထားလေရဲ့ . . .
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးထဲကလဲ သင်္ဘောတွေ၊ စက်လှေတွေနဲ့ ခရီးသွားကြ ပစ္စည်းသယ်ကြ . . . ကုန်သွယ်ကြ . . .
ဧရာဝတီမြစ်ဘေးမှာပဲ ရေတွင်းတွေတူးလို့ မြို့ထဲကို ရေဖြန့် . . .
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို အမှီပြုလို့ နေထိုင်စားသောက်ကြသူတွေအများကြီး . . .
အဲဒီဧရာဝတီဆိုတဲ့မြစ်ကြီးက ဇူလိုင်လ ၁၅ရက်နေ့လောက်ကစပြီး
သုံးလေးနှစ်ရှိလာပြီ ရေတိုးတက်လာပါတယ် . . . .
ဟိုး တစ်နှစ် ရေတွေ အရမ်းကြီးတုံးကလဲ ဒီလို ဇူလိုင် ၁၅ရက်လောက်က စခဲ့တာပဲ . . .
မနှစ်ကရော ဒီလို ဇူလိုင် ၁၅ရက်ပဲ . . .
စတိုးခဲ့တာ . . .
မသိသာဘူးပေါ့ . . . .စတိုးစတော့
တဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ် . . .
မိုးရွာတော့ ရေက မဆင်းနိုင်
မြစ်ရေတက်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ . . .
ရန်ကုန် အသွား၊ အပြန် လမ်းမှာ ရွာလေးတချို့ ရေမြုပ်နေပါတယ် . . .
အသွားတုံးက ထက် အပြန်မှာ ချောင်းတွေ ရေပိုတက်နေပါတယ် . . .
နောက်အောက်ပိုင်းမှာ မိုးကောင်းပါတယ် . . .
ဒါဆို အောက်ရေ တန့်တော့မယ် . . .
အထက်က မိုးကောင်းပြီး တောင်ကျရေများ များ ဆင်းလာရင်
မြစ်ထဲက ရေမဆင်းနိုင်ပဲ မန္တလေးနားတစ်ဝိုက်မှာ ရေ တိုးလာနိုင်ပါတယ် . . .
အခု တိုးပြီလားဆိုတော့ တိုးတော့ တိုးတာပေါ့ . . .
ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ . . .
ယခင်နှစ်အတွေ့အကြုံများအရ ဇူလိုင် ၁၅ရက်မှသည် သြဂုတ်၁၅ရက်အတွင်းကို မြစ်ရေ
စောင့်ကြည့်ရမယ့် ရက်များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ . . .
ဘယ်သူမှ ဘာမှ မဖြစ်ကြစေရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ . . .
သြော် မန္တလေးက စာနယ်ဇင်းများ ကတော့ ရေကင်းစောင့်လို့ မှတ်တမ်းတင်ကြတယ်ဆိုပဲ . . .
အားလုံးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ . . .
(အခုပို့စ် တင်မယ့်အချိန်မှာပဲ မိုးကြီးရွာနေပါပြီ)
Posted by Unknown အချိန် 3:36 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
Posted by Unknown အချိန် 9:52 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဒီကနေ့ မွန်းလွဲ ၃နာရီ၁၅ လောက်မှာပဲ ရန်ကုန်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ရောက်တာနဲ့ တစ်ညလုံး ရထားစီးထားတော့ ရေပြေးချိုးတာပေါ့
အပြင်ထွက်မယ်ဆိုပြီး ထွက်လာမှ မိုးကရွာ
အင်တာနက်ဆိုင်ဝင်ပြီး သုံးကြည့်နေပါတယ် . . .
ဒီမှာ ကွန်နက်ရှင်က ပိုငြိမ်သလိုပါပဲ . . .
အော် ရန်ကုန် . . ရန်ကုန် . . .
ဘယ်မှ ကို မသွားရသေးတဲ့ ရန်ကုန် . . ..
ဘာတွေများ ပြောင်းလဲနေလဲ မသိ . . .
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် ပန်းချီ ပညာရှင်များက
ပန်းချီပြပွဲတစ်ခုကို ပံသုစန္ဒာ ပန်းချီသင်တန်းကျောင်း(၇၈လမ်း၊ ၂၇လမ်းနှင့်၂၈လမ်းကြား)မှာ ကျင်းပပါတယ်။
donation art show လို့ အမည်တပ်ထားတဲ့ ပန်းချီပြပွဲမှာ
ပန်းချီဆရာ၊ ဆရာမပေါင်း ၄၁ဦးက ပန်းချီကား ၄၁ကားနှင့်
ဆရာကြီး U Ba Thet, U Kin Maun(Bank). U Kan Nyunt
တို့ရဲ့ ပန်းချီကား သုံးကားကိုလဲ ပြသထားပါတယ်။
ရရှိလာတဲ့ ရောင်းရငွေများကို လှူဒါန်းသွားမယ်လို့
၆ရက်၊ ၇ရက် နေ့များမှာ ပြသထားပြီးတော့
ရရှိလာတဲ့ ရောင်းရငွေများကို လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆ရက်နေ့ နံနက် ၉နာရီလောက်မှာရောက်ခဲ့စဉ်က
ဆက်လက် ရောင်းချရဦးမယ်လို့လဲ ထင်မြင်မိပါတယ်။
မူရင်းဈေးထက် ချ ပြီး ရောင်းထားတယ်လို့လဲ ပန်းချီပြပွဲပါ ဆရာများက ပြောပြကြပါတယ်။
အနုပညာရှင်တို့က မိမိတို့ တတ်နိုင်တဲ့ အနုပညာကို လှူဒါန်းရာမှာ အသုံးပြုကြတာဖြင့်
ကိုယ်တိုင် မလှူနိုင်တော့လှူနိုင်သူတွေ သတင်းသာ လိုက်ရှာဖော်ပြနေရပါတော့တယ် . ..
Posted by Unknown အချိန် 7:50 PM 1 comment: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ကနေ့ ညနေပိုင်းက ဘောလုံးပွဲ ဒုတိယနေ့ ဒုတိယပွဲစဉ်ကို ဗထူးကွင်းမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်
ဒီနေ့တော့ ဒုတိယပိုင်းစမှ ရောက်ခဲ့ပါတယ်
ကျွန်တော်ရောက်တော့ old star အသင်းက ၂ဂိုး၊ မင်းသားလေးများက ၁ ဂိုးပါ။
ဒုတိယပိုင်းမှာပဲ မင်းသားလေးများက ကျောနံပါတ် ၇ မင်းသားလေး ဖြိုးဝေထက်က ချေပဂိုး သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
မကြာမီမှာပဲ ပထမ အနိုင်ဂိုးအဖြစ် ကျောနံပတ် ၇ ဖြိုးဝေထက်ကပဲ သွင်းယူခဲ့ပါတယ်(ပထမပိုင်း တစ်ဂိုးနဲ့အတူ သုံးဂိုး သွင်းခဲ့တာပါ)
အဲဒီနောက်မှာတော့ ၀င်းနောင်က အနိုင်ဂိုး ထပ်မံ သွင်းယူပါတယ်။
နောက်ပိုင်း မိနစ် ၃၀ခန့်မှာ ဖိုးချစ်က တစ်ဂိုးသွင်းယူပြီး
မကြာခင်ပဲ ပင်နယ်တီ ရရှိပြီး ဖိုးချစ်က ထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
old star အသင်းက ၂ ဂိုး၊ မင်းသားလေးများက ၆ဂိုးဖြင့်
နှစ်ပွဲ ကစားရာမှာ ပထမနေ့က မင်းသားလေးများက ၂ဂိုး၊ ၃ ဂိုးဖြင့် ရှုံးပြီး
ဒုတိယပွဲမှာ ၆ ဂိုး၊ ၂ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 7:37 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ယနေ့ ညနေ ၂နာရီက စပြီး မန္တလေး ဗထူးကွင်းအတွင်းမှ
ရှဲလ် တေးဂီတနှင့်အတူ ဖျော်ဖြေမှုများ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ၄နာရီ ၁၅မိနစ်မှာ ဘောလုံးပွဲ စတင်ဖို့ ကွင်းထဲဝင်နေရာယူကြပြီး
ပထမပိုင်းပြီးတဲ့အထိ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ဂိုးသွင်းခွင့်များရသော်လည်း
ယခင် ကျောင်းသားလက်ရွေးစင်အဖြစ် ကန်ဖူးတဲ့ ဖိုးချစ်တစ်ယောက်
တော်တော် ကြိုးစားကစားသော်လည်း ဂိုးတိုင်ထိပြန်ထွက်တာနဲ့
ဒုတိယပိုင်း စကန်ချိန်မှာတော့ မိုးအနည်းငယ် ကျစပြုနေပါတယ်
ဒါကြောင့် မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ကင်မရာလေး မိုးစိုမှာကြောင့်လို့
ယခု ပို့စ်တင်ချိန်မှာတောင် မပြီးသေးတဲ့ ဘောလုံးပွဲကနေ ပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်
နောက်နေ့မှ ဘယ်သူနိုင်လဲ ပြောတော့မယ်ဗျာ
Posted by Unknown အချိန် 6:28 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မနေ့က(၅-၇-၂၀၀၈)ရက်နေ့ ညနေပိုင်း ၇နာရီဝန်းကျင်မှာ
အတွင်းပိုင်းမှ မီးခိုးထွက်သောကြောင့် အပြင်က ၀ိုင်းငြိမ်းကြပြီးနောက်
အတွင်းက ကြေးမီးပူ(မီးသွေးသုံး)က တစ်ဆင့် လောင်ကျွမ်းတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
အတွင်းက ဆိုင်ခန်းတစ်ချို့ ပျက်စီးမှုရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းမှာ မြို့တော်ခန်းမ အတွင်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ ဟစ်ဟော့ရှိုးရှိပါတယ် . . .
လူငယ်တွေအကြိုက်ပေါ့ . . .
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် ရန်ပုံငွေ ဘောလုံးပွဲ ကျင်းပမည်
မန္တလေးတိုင်းလက်ရွေးစင်ဟောင်း ဘောလုံးသမားများ(Old Ster) ဘောလုံးသမားကြီးများနှင့်
မြန်မာ့သဘင်အလှဆင်သူမင်းသားလေးများ ချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲအဖြစ် ဗထူးကွင်းမှာ
ဇူလိုင် ၆ရက် ၇ရက် များမှာ ကျင်းပပါမယ်။
ရရှိလာတဲ့ ကွင်းဝင်ကြေးများကို နာဂစ်မုန်တိုင်းခံရသူများအတွက် မန္တလေးတိုင်း တယက မှ တစ်ဆင့်
ကွင်းဝင်ကြေးအဖြစ် နှစ်ရက်စာ နှစ်ထောင်ကျပ်ပါ
မွန်းလွဲ ၂နာရီကစပြီး ရှဲလ် တေးဂီတနှင့်အတူ မင်းသားလေးများကဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြမှာပါ။
ဖိုးချစ်၊ ၀င်းနောင်၊ လှိုင်ဘွားအောင်စတဲ့ မင်းသားလေးများနဲ့အတူ
ညနေတိုင်း ဗထူးကွင်းများ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေကြတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဘောလုံးပွဲကောင်းတစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အရင်က လက်ရွေးစင်ဟောင်း အသက် ၅၀အထက် ကစားသမားကြီးများရဲ့ အစွမ်းကိုလဲ တွေ့နိုင်မှာပါ . ..
Posted by Unknown အချိန် 4:31 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
အကောက်အခွန်မဲ့ ဆိုင်ကယ်များ မတလ လိုင်စင်ထုတ်ပေး
ကနေ့ ဇူလိုင် ၁ရက်မှ စတင်ပြီး
အောက်တိုဘာ လကုန်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်
အကောက်အခွန်နဲ့အခြား သက်ဆိုင်ရာ ကောက်ခံမှုအနေနဲ့
မော်ဒယ်ကိုမူတည်ပြီး ၃ ပိုင်းခွဲထားပြန်ပါတယ်
အနည်းဆုံးကျသင့်ငွေ ကျပ်၇၅၀၀၀ ကနေ အများဆုံး မော်ဒယ်အမြင့်ဆုံး ဂျပန်ဆိုင်ကယ်ဆိုရင် ၄သိန်းခွဲခန့်အထိ
ကျသင့်မယ်လို့ မော်ဒယ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ဇယားများက ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကွင်းအခြေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုပုံစံကတော့ နောက်နေ့ သွားကြည့်လိုက်ဦးဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 7:46 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်သူများအတွက် ဇာတ်မင်းသားများ စုပေါင်းကလို့ ရန်ပုံငွေရှာမည်
ရန်ကုန်၊ မန္တ္တလေးစတဲ့ နေရာစုံက ဇာတ်မင်းသားများ စုပေါင်းလို့
ယနေ့မှစပြီး ၃ရက်တိုင်တိုင် မန္တလေးမြို့ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ စုပေါင်းလို့
ကပြပြီး နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေကြပါမယ်။
ယနေ့ ည ၇နာရီမှ ၁၁နာရီထိ ကပြဖျော်ဖြေပါမယ်။
မန္တလေးက ၀င်းနောင်၊ လှိုင်ဘွားအောင်စတဲ့ ဇာတ်သဘင်အလှဆင်သူများနဲ့အတူ
ချမ်းသာ၊ နန်းဝင်း၊ မိုးမင်း
ဖိုးချစ်၊ တင်ဇာမိုးဝင်း၊ စတဲ့ မင်းသားများနဲ့အတူ မင်းသားပေါင်း ၃၀ကျော် ပါဝင်ကပြပါမယ်
လက်မှတ်က တစ်သောင်း၊ ခုနစ်ထောင်၊ ငါးထောင် ဖြစ်ပါကြောင်း . . ..
လက်မှတ်လဲ တော်တော်ရောင်းရတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 1:41 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာပဲ မျှော်လင့်နေကြတဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (၁၀တန်း)အောင်စာရင်း ထွက်ပါတယ်။
ရှုံးသူတော့ကတော့ . . .
ရပ်ကွက်ထဲလဲ ကျတဲ့အိမ်က ဆူသံ ငိုသံနဲ့ပေါ့
အောင်တဲ့အိမ်ကျလဲ ပျော်သံ နဲ့ ဆူလို့ . . .
အောင်သူတွေလဲ ရှေ့ဆက်မယ့်ဘ၀ခရီးကို အရွေးမမှားပဲ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တာကို ရွေးဖို့နဲ့
ကျသူတွေလဲ ထပ်ပြီး ကြိုးစားကြဖို့ လိုနေပါတယ်။
ပန်းကလေးများတော့ ဖူးကနေ အပွင့်ကို ပြောင်းပါတော့မယ်
တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပညာရယ်၊ ဘ၀အတွက် အတွေ့အကြုံ အမြင်သစ်များ ရရှိနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 10:00 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေး ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း တိုးမြှင့်မည်
မန္တလေးတိုင်း ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီက
အစည်းအဝေးကျင်းပပြီး မန္တလေးမြို့တွင်း ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကို
တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများက တစ်ဆင့်သိရပါတယ်။
နှစ်အလိုက် ယာဉ်တိုက်မှုမှာ တဖြည်းဖြည်းများလာလို့ လုပ်ရတာလို့လဲ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်း မန္တလေး အဓိကနေရာများမှာ စီစီတီဗွီကင်မရာများတပ်ဆင်ထားပြီး
ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 9:34 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မိုးရွာသောအခါ ရင်ထဲမှာ လူတိုင်း အမျိုးမျိုးခံစားကြရပါတယ်။
ဒီကနေ့မိုးရွာတော့ အိပ်ရာထဲမှာ အိပ်နေတုံးပါပဲ .
ညနေပိုင်း ၂နာရီလောက်ထင်ပါတယ် . .
အိမ်ထဲရေ၀င်ရင် မလွတ်တာတွေ ဖယ်ရင်းမရင်းနဲ့
ဒီလိုနဲ့ ညနေ ၃နာရီခွဲလောက်မှာ မိုးကြီးတိတ်လို့ ဖွဲဖွဲနဲ့သာ ရွာနေပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်အကျင့်ကလဲ မိုးရွာပြီးရင် လမ်းထိပ်ထွက်ကြည့်တာပဲလေ
မိုးက ရေသိပ်မပါသလို ခံစားရပေမယ့်
လမ်းထိပ်လဲရောက်ရော ရေတွေက တစ်လမ်းလုံးပြည့်လို့
ကျောင်းကလဲ အဆင်း ကလေးတွေ အရမ်းဒုက္ခရောက်တာ တွေ့ရပါတယ်။
အပူအပင်ကင်းတဲ့ကလေးဘ၀ဆိုတော့လဲ . .မိုးရေနဲ့ပြည့်နေတာကို ပျော်ပြီး
ရေချိုးရေကူးကြပေါ့လေ . . .
မျက်စိရှေ့မှာပဲ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ မိုးကာ၊ ထီးမပါပဲ
လွယ်အိတ်မနိုင်၊ ထမင်းချိုင့် မနိုင်နဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်
ဒူးအထက် ရေကိုလဲ ရုန်းရသေးတယ်
လွယ်အိတ်က ရေထဲမှာကျလို့ . . .
စိုနေပြီ . . .
သွားကူမလို့ လုပ်တုံးမှာပဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ထိန်းရင်း
အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ထိန်းပြီး
သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားမှုကို သိချင်တာရယ်ကြောင့်
ရေထဲက ကလေးတွေ ကျောင်းက ပြန်လာတာကိုကြည့်ပြီး
ကျောင်းတက်ခွင့်မရတော့သော . . . .
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးများအားလုံးဆီကို အတွေးနယ်ချဲ့မိပါတယ်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်
အလှူခံရတာ ကြပ်တည်းလာတာရယ်(လှူပြီးကြတော့ ထပ်လှူဖို့ အခက်တွေ့တာပေါ့လေ)
ကုန်ကျစရိတ် အလှူငွေ ရရှိရေးအတွက် အချိန်တိုင်း ကြိုးစားလို့နေရပါတော့တယ်
အဲဒီကျောင်းက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးတွေ ပညာသင်ကြားဖို့အရေး
ဘယ်လောက်များ စောင့်မျှော်နေကြမလဲလို့ . . . ..
ကလေးတို့ပညာသင်ကြားဖို့အတွက် အဆောက်အအုံ(ကျောင်း) ဆောက်လုပ်ဖို့
ကြိုးစားနေပါတယ် . . .
အလှူငွေ မြန်မြန် များများရရှိပါစေလို့သာ ဆုတောင်းပေးကြပေါ့ကွာ . . .
ကိုယ်ပိုင် သီးခြားလှူဒါန်းလိုလျှင်ဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီကို အလှူငွေ ထည့်ဝင်နိုင်သလို
မိမိနာမည် မော်ကွန်းထိုးလို့ လှူဒါန်းချင်ရင်လဲ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် . . . .
ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် cittasukha@gmail.com မှ တစ်ဆင့်
ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ . . . .
Posted by Unknown အချိန် 7:41 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေးက လူရွှင်တော်များ၊ ဘိတ်သိတ်ဆရာများ၊ ဆိုင်းဆရာများ၊ အငြိမ့်မင်းသမီးများစုပေါင်းလို့
အလှူခံထွက်ရရှိတဲ့ အလှူငွေ၊ ပစ္စည်းများကို ယနေ့ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲလေးကို
ရွာစားကျော် စိန်ဓူဝံ နေအိမ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
လေဘေးဒဏ်သင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်အဖွဲ့သား ၄၈ဦးအား ထောက်ပံ့ခြင်း
အခြား သွားရောက်လှူဒါန်းရန် အလှူငွေကျပ် ၈၅သိန်းပေးအပ်ခြင်းများ
Posted by Unknown အချိန် 7:26 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ရန်ကုန်တိုင်းနှင့်ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘက်သို့ လေပြင်း တိုက်ခတ်နိုင်
မြန်မာ့မိုးလေ၀သဌာနကလည်း ထုတ်ပြန်တယ်လို့ ကြားရပြန်ပါတယ်။
ရာဟူးက ပုံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘုရားနှစ်ဆူ ထပ်မံ တွေ့ရှိပင့်ဆောင်
တွေ့ရှိပြီး ပူဇော်နေကြရာက ယခုဆိုလျှင် ၅ဆူ ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
၁၁ရက်နေ့မှာပဲ ဥာဏ်တော် ၄ပေ၊နဲ့ ၂ပေ ခန့်ရှိတဲ့
ဘုရား၂ဆူ ထပ်မံ တွေ့ရှိ ဆယ်ယူပြီး
ဒီသတင်းကို ယနေ့ထုတ် အထက်မြန်မာဂျာနယ်မှာ တွေ့ခဲ့ရတာပါ။
မနေ့ညနေက ရောက်လာတဲ့ ဂျာနယ်မှာ မနေ့ကဖြစ်တဲ့သတင်းကို
ဖော်ပြနိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရတဲ့အတွက် ဂျာနယ်ရဲ့ မြန်ဆန်မှုကို ချီးကျူးမိပါကြောင်း။
Posted by Unknown အချိန် 3:32 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်များ စဉ့်ကူး အမှတ်(၉၁)အမကတွင် လှူဒါန်း
ပုံမှန် ၆လတစ်ကြိမ် အလှူဖြစ်
စဉ့်ကူးမြို့ အမှတ်(၉၁)အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းတွင် ယနေ့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 10:31 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ကသောလက်ဖြင့် ကူညီမည့် မင်းသားလေးများ ယနေ့ ရန်ကုန်သို့ ယာဉ်တန်းဖြင့် ထွက်ခွာ
ကနေ့ မနက်က ကားကြီးဝင်းကို အလှူအတွက် ပစ္စည်းရောက်လို့ သွားယူတဲ့အခါမှာ
ကသောလက်ဖြင့် ကူညီမည့် မင်းသားလေးများရဲ့ ကားတန်းနဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ရရှိခဲ့တဲ့ အလှူငွေ သိန်းတစ်ရာကျော်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်သွားလှူကြတာဖြစ်ပြီး
လမ်းတစ်လျှောက်လဲ ကပြဖျော်ဖြေပြီး အလှူခံသွားကြမှာပါ။
လေးညအိပ် ငါးရက် သွားကြမယ်လို ကြားသိရပါတယ်။
ကသောလက်များ ကူညီနိုင်ကြပါစေ . . ..
Posted by Unknown အချိန် 1:26 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဂရုဏာသံစဉ် ရန်ပုံငွေရှာတေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ
မနက်ဖြန် စနေ့နေ့မှာ မန္တလေး ဗထူးကွင်းမှာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ပါဝင်သီဆိုမည့် တေးသံရှင်များက
ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီမှ ၆နာရီအထိ မန္တလေးစီးတီးဟိုတယ်မှာ အလှူငွေနဲ့ပစ္စည်းများကို
တော်တော်များများ လာရောက်လှူဒါန်းကြတာကို တွေ့ရပြီး
တေးသံရှင်များက အလှည့်ကျ လက်ခံရယူကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရှေ့တင်ပဲ ဦးဇင်းတစ်ပါးက သင်္ကန်း၊ ဖိနပ်၊ ထီးနှင့်အလှူငွေ လာလှူသလို
တချို့ကလည်း အ၀တ်အထည်များလာလှူဒါန်းတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဖျော်ဖြေပွဲ လက်မှတ်ခ အဖြစ် တစ်သောင်းခွဲနဲ့ ငါးထောင်ကျပ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
မနက်ဖြန် ၇ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ဗထူးကွင်းမှာ တေးသံရှင် စုံလင်စွာနဲ့
တေးဂီတ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပသလို
ဇာတ်လမ်းများ ယနေ့ စတင်ရိုက်ကူးကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 9:42 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ရန်မျိုးလုံ ဓမ္မာရုံမှာ နောက်ထပ် ဘုရားတစ်ဆူ ထပ်မံတွေ့ရှိပူဇော်
ယခင်လ အတွင်းက ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းက ဆယ်ယူပူဇော်ခဲ့တဲ့ ဘုရားနှစ်ဆူ အပြင်
၅-၆-၂၀၀၈မှာ ဘုရားတစ်ဆူ ထပ်မံ ဆယ်ယူရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားများကို ရန်မျိုးလုံ ဓမ္မာရုံမှာ ယာယီ စံကျောင်းတော်နဲ့ပူဇော်ထားပြီး
မကြာမီ ကျောင်းတော် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 6:57 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဆိုင်း၊ ဘိသိက်၊ အငြိမ်လူရွှင်တော်၊ မင်းသမီးများစုပေါင်းအလှူခံ
မန္တလေးက ဆိုင်း၊ ဘိသိက်၊ အငြိမ်လူရွှင်တော်၊ မင်းသမီးများစုပေါင်းပြီး
ယနေ့နံနက်ပိုင်းကစတင်လို့ လေဘေးသင့်ပြည်သူများကို ကူညီနိုင်ဖို့
မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးကို ဦးတိုက်ပြီး ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ဘုရားကြီး
အလှူခံရာ နေ့လယ်ထမင်းစားချိန်တွင် အလှူငွေ ၇သိန်းကျော် ရရှိသွားပါတယ်။
၄ရက်နေ့မှာ လောကနတ်ခန်းမမှ စိန်ပန်းရပ်ကွက်ပိုင်း
ညပိုင်း ပေါက်မြိုင်ကျောင်းတိုက် အရှေ့ပေါက်
၅ရက်နေ့ လမ်း၈၀မှ ရတနာပုံဈေး မင်္ဂလာဈေး
ညပိုင်း ပုလင်းဝင်း ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်းအနီး
၆ရက်နေ့ ၈၄လမ်း၊ ဈေးချို၊ ညောင်ပင်ဈေး၊
ညပိုင်း အောင်တော်မူ ရေအိုးစင်အနီး
၇ရက် ဘုရားကြီးအရှေ့ဘက်၊ တက္ကသိုလ်မြောက်ဘက်၊ ၇၃လမ်း၊ ၂၇လမ်း၊ ၆၂လမ်း
ညပိုင်း မြောက်ပြင် အရိပ်မထွက်ဘုရားအနီး
၈ရက်နေ့ ဘုရားကြီးတောင်ဘက်၊ တမ္ပ၀တီကွက်သစ်
ညပိုင်း အမရပူရ လမ်း၅ခွ
Posted by Unknown အချိန် 5:04 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
Posted by Unknown အချိန် 5:00 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေးလူရွှင်တော်များ နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွက် အလှူခံထွက်မယ်
မန္တလေးက လှူရွှင်တော်များက မန္တလေးမြို့တွင်း လှည့်လို့ ၄ရက်နေ့မှာ
ဟာသပညာဖြင့် ဖျော်ဖြေရင်း အလှူငွေရဖို့
အလှူငွေရဖို့ ကြိုးစားသွားကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် . . .
မနက်ဖြန် သွားပြီး တွေ့ဆုံကြည့်ပါဦးမယ် . . .
Posted by Unknown အချိန် 10:11 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေးမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် ဆုတောင်း
မန္တလေးမှာ ယနေ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် ဆုတောင်းပွဲ
ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 10:07 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ပေါ်တော်မူ ဘုရား နှစ်ဆူ ဖူးခဲ့ပါပြီ
ရန်မျိုးလုံ ဘုရားမှာ ဆယ်ယူပူဇော်ထားတဲ့ ဘုရားနှစ်ဆူကို ယနေ့ညနေပိုင်းက
ဥာဏ်တော် ၁၀ပေ၊ ၁၀လက်မ၊
လုံးပတ်တော် ၁၀ပေ ၄လက်မ
ဥာဏ်တော် ၃ပေ ၅လက်မ
လုံးပတ်တော် လက်မ ၃၀ခန့်ရှိ
ကုသိုလ်ဖြင့် စေတနာကြေး ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး အပ်နှံလက်ခံနေပါတယ်။
ပုံများ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . . .
ဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ပါစေ . . .
Posted by Unknown အချိန် 10:27 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
စိတ္တသုခပရဟိတလူငယ်များ၏ ပုံမှန် ခြောက်လပတ်အလှူ
စိတ္တသုခပရဟိတလူငယ်များက ခြောက်လတစ်ကြိမ်လှူဒါန်းကြဖို့ အစီအစဉ်များ ဆွဲထားကြပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 10:35 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မန္တလေး ဧရာဝတီမြစ်ထဲက ပေါ်တဲ့ဘုရားနှစ်ဆူ
မန္တလေးမြို့ ဧရာဝတီမြစ်ထဲက ဘုရားနှစ်ဆူပေါ်တဲ့အတွက်
ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးက ရန်မျိုးလုံ ဓမ္မာရုံမှာ ယခုလောလောဆယ်ဆယ်ပူဇော်ထားရှိပါတယ်။
တွေ့ရှိပုံကတော့ ရေအောက်မှာ ပစ္စည်းရှာဖွေကြတဲ့ သူက ပစ္စည်းရှာရင်
ဆင်းတုတော်အသေးကို စတင်တွေ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဆင်းတုတော်တွေ့တော့ ကမ်းပေါ်က အဖွဲ့ပါ ငုပ်ရှာတော့ ဆင်းတုတော်အကြီးကို
ပထမတွေ့တဲ့ အသေးကို မတွေ့လို့ ထပ်ရှာတော့မှ နှစ်ဆူလုံးတွေ့တာလို့ ပြောပါတယ်။
ဘုရားနှစ်ဆူက ရေအောက်မှာ ကြာခဲ့တော့ ရေညိတက်နေပါတယ်။
အသေးကိုတော့ လူအား၊ အကြီးကိုတော့ ကရိန်းနဲ့ ဆယ်ယူပင့်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါက သွားခဲ့တဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်စီက သိရပါတယ်။
အဲဒီဘက်ထိ သွားဖို့ အဆင်မပြေသေးလို့ပါ
Posted by Unknown အချိန် 10:06 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မင်းသားလေးများ ဈေးချိုတော်မှာ အလှူခံ
ကသောလက်ဖြင့် ကူညီမည့် နာဂတ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက်
အလှူခံအဖွဲ့ ဈေးချိုတော်မှာ သီဆိုဖျော်ဖြေအလှူခံနေပါတယ်။
တတိယနေ့က အလှူခံရရှိငွေက ၁၄သိန်းကျော်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဦးရွှေနန်းတင် ကိုလဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အကယ်ဒမီ ဂီတစာဆို စိန်မိတ္တား ကိုလဲ တွေ့ခဲ့ရပြီး အလှူငွေ
သဘင် အစည်းအရုံးက စုံစုံလင်လင်ပါရှိပြီး
မင်းသားလေးများကိုယ်တိုင် ဈေးချိုတော်ထဲဝင်လို့ အလှူခံနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ . . .
အားလုံးဝိုင်းဝန်းလို့ လေဘေးသင့်ပြည်သူများကို ကူညီနိုင်ကြပါစေ . . .
Posted by Unknown အချိန် 3:50 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
လူစာရင်း ပြီးတော့ ကျွဲနွား စာရင်း
ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ၁၄၀၉၅၂ ကောင်
ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ၁၄၇၅၂၂ ကောင်
စုစုပေါင်း ၂၈၈၄၇၄ ကောင်
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြသည်။
Posted by Unknown အချိန် 10:04 PM 1 comment: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံး၊ ပျောက်ဆုံးစာရင်း
သတင်းစာမှ သတင်းများမှ ကိုးကားဖော်ပြပါတယ်။
သေဆုံး ၇၇၇၃၈ ဦး
ပျောက်ဆုံး ၅၅၉၁၇ ဦး
ဒဏ်ရာရ ၁၉၃၅၉ ဦး
စုစုပေါင်း ဘေးဒဏ်ခံရသူ တစ်သန်းခွဲရှိပြီး
၁၀၆၄၆၂၃ခန့်ကို ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့
Posted by Unknown အချိန် 6:06 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ကသောလက်ဖြင့် ကူညီမည့် မင်းသားလေးများ
ပထမနေ့မှာ အလှူငွေ ကျပ်ခုနစ်သိန်းကျော် . . .
ဒုတိယနေ့တွင် အလှူငွေ ကျပ် ၁၅သိန်းကျော်နှင့်
ပစ္စည်းမျိုးစုံကို လက်ခံရရှိတယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။
လူရွှင်တော်ကြီးများကလည်း မနက်ဖြန်မှာ လှည့်လည် အလှူခံမယ်လို့ သိရပါတယ်။
စာရေးစရာများကလည်း လိုက်လံလို့ အလှူခံနေကြကြောင်း
မန္တလေး အနုပညာရှင်များရဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသော
မေ ၂ရက် ၃ရက်က မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့
မြန်မာ့သဘင်အလှဆင်သူ မန္တလေးဇာတ်မင်းသားလေးများက မိမိတို့ အနုပညာစွမ်းအားဖြင့်
ကားပေါ်မှာ တီးဝိုင်းဆင်ထားပြီး ဇာတ်မင်းသားလေးများက အဆိုအကဖြင့် လှည့်လည်
ယနေ့တော့ ဘုရားကြီးကို ဦးတိုက်ပြီး မြို့သစ်ဖက်ကို လှည့်လည် အလှူခံမှာပါ။
၂၇ ရက်နေ့က ဘုရားကြီးတောင်ဘက်မှ တမ္ပ၀တီဘက်
၂၈ရက် နေ့ ၈၄လမ်း၊ ၃၅လမ်းမှ စိန်ပန်းရပ်ကွက်ဘက်
၂၉ ရက်နေ့ ဈေးချိုမှ မြောက်ပြင် (မနက်ပိုင်း ဈေးချိုတွင် ဖျော်ဖြေအလှူခံပါမယ်)
၃၀ရက်နေ့ ဘူတာကြီးအရှေ့ဘက်မှ နန်းရှေ့ဘက်
အဲလို လှည်လည် အလှူခံကြမှာပါ
လေဘေးသင့်ပြည်သူများထံ ဖျော်ဖြေရင်း လမ်းတစ်လျှောက်အလှူခံပြီး
လေဘေးသင့်ပြည်သူများ ခဏတာဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေဖို့
ဖျော်ဖြေရေးသွားလုပ်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအနေနဲ့ ဖျော်ဖြေပေးနိုင်ပါစေလို့ . . .
Posted by Unknown အချိန် 7:32 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
စိတ္တသုခပရဟိတ လူငယ်များရဲ့ နာဂစ် မုန်တိုင်း ခံရသူများအတွက် လှူရန် အစီအစဉ်
စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်များက နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသော ဒေသများအတွက်
လှူဒါန်းရန် ဧရာဝတီတိုင်း မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ရာ
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့အနီးက ကျေးရွာလေးမှာ မူလတန်းကျောင်း အဆောက်အအုံတစ်ခု
အဲဒီနောက် တတ်နိုင်သမျှ နဲ့ စာသင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့
တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့အတူ လကုန်မှာ အလှူငွေ ပေးပို့ပြီး
ဒါကြောင့် လှူဒါန်းပြီး ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အားလုံးလိုလို ပုံအော်ပြီး လှူကြတာ သိနေလို့ပါ။
ဒါပေမယ့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါဦးလို့ . . .
မျက်နှာပူပူနဲ့ ထပ်ပြီး အလှူခံနေရပါတော့တယ်ဗျာ . .
စိတ္တသုခက လူတစ်ယောက် မော်လမြိုင်ကျွန်းမှာ နေခဲ့ပါတယ်။
ပါလာတဲ့ မှတ်တမ်း မန်မိုရီကတ် အပြန်ခရီး သင်္ဘောပေါ် မိုးမိတာ ရေစိုသွားလို့
ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ရလျှင် ရခြင်း ပုံများနှင့်တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ
ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်း ရွာတဲ့မိုးက
မန္တလေးရဲ့ မိုးတွင်းမှာ ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကို ပြနေပါတယ်။
အခု မိုးအစမှာတောင် ဒီလိုဖြစ်နေရင်
မိုးတွင်း တစ်လျှောက်လုံး ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာ . . . ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
စည်ပင်သာယာကလည်း မြောင်းသန့်ရှင်းရေးကို တိုးပြီး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုသလို
မိမိအိမ်ရှေ့မြောင်း မိမိတာဝန်ယူတဲ့ စနစ်တစ်ရပ်လဲ ထူထောင်ဖို့ လိုနေပါတယ်။
မြောင်းထဲ အမှိုက်မချဖို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိနေပါတယ်။
ဒီလိုသာ ဖြစ်သလို ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့
ဒီမိုးတွင်းလဲ အရင်မိုးတွင်းလိုပဲ မန္တလေးလမ်းပေါ်မှာ ရေတွေ
ဖွေးနေဦးမှာပါပဲ . . . လေ
အိမ်ထဲရေ၀င်တော့ လုပ်လိုက်ရတဲ့ အဖြစ်နဲ့
နာဂစ်မုန်တိုင်း ခံရသူတွေဆို ဘယ်လောက်ပြင်းထန်မလဲဆိုတာ တွေးမိပါလေရဲ့ . .
အခု နာဂတ်မုန်တိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ဘလော့မှာ ရာသီဥတု မိုးလေ၀သတွေကိုပဲ ဦးစားပေးတင်ဖြစ်နေပါတယ်
အခု ဖြစ်နေတဲ့ မန္တလေးသတင်းတွေကို ရောထွေးမသွားချင်ဘူး
ဒါကြောင့် သတင်းတွေအတွက် သီးသန့် နေရာတစ်ခု လုပ်လိုက်ပါတယ်
မန်းက ဖြစ်နေတဲ့ သတင်းမျိုးစုံ
Posted by Unknown အချိန် 5:29 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မိုးလေးဝသ မန်းမှာ နေပူသည်
မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်း ဧရာဝတီတိုင်းက လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းက
မြန်မာပြည်အရှေ့ဘက်က မုန်တိုင်းတစ်ခု ပျက်ပြယ်ပြီး
အဲဒီအကျိုးဆက်နဲ့ မန်းမှာတော့ အခုနေပူနေကြောင်းပါခင်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 1:36 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ယနေ့ မိုးလေ၀သ ထူးခြားချက်
မြန်မာပြည် အရှေ့ဘက်မှာ မုန်တိုင်းတစ်ခု ထပ်မံတိုးပြီး ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်
မုန်တိုင်း နှစ်ခု မြန်မာပြည်အရှေ့ဘက်မှာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းပေါ်က လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းက ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်း မိုးများမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
မိုးလေ၀သ ဘာသာရပ်ကို သေသေချာချာမသင်ဘူးသော်လည်း
တွေ့မြင်ရတာကို ဖတ်မှတ်ပြီး ခန့်မှန်းထားတာပါ။
တိတိကျကျကတော့ မိုးလေ၀သ ကြေညာချက်များကို သေချာ စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 6:38 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှ မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်စရာ အစုအဝေး ပြောင်းလဲမှုကို
ညနေပိုင်းက ထက် အနောက်ဖက်ကို ရွှေ့လျားသွားတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 11:05 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ယခု လက်ရှိ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှာ
မုန်တိုင်းလို့ ထင်ရတဲ့ အစုအဝေးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
မိုးလေ၀သ ကြေညာချက်များကို နားထောင်ပြီး
နောက်ဆုံး ယခု ၆နာရီအချိန်မှာ
မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဆက်လက်တည်ရှိပြီး
မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ဘက် ကို ဗဟိုပြုတဲ့
မုန်တိုင်းအသွင်ကူးပြောင်းပါက သတိပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါကြောင်း
ပထမဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရမ်မာဆမ် နားမှာပါပဲ . . .
Posted by Unknown အချိန် 6:15 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မြေပုံများ နှိုင်းယှဉ်ချက် ယခုအနေအထား
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှာ မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းပါ
ဂျန်နိုင်ငံ ဘက်မှာ မုန်တိုင်းရှိနေပါသေးတယ်။
အပူချိန် မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်တာကို ပြတာပါ။
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်စဉ်က အနေအထား
အနီရောင်အတွင်းက ပန်းရောင်က မုန်တိုင်းဗဟိုချက်ပါ
Posted by Unknown အချိန် 4:45 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မိုးလေ၀သ ဆိုင်ရာ ၀က်ဆိုဒ်များက ဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်။
အပူကြောင့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းမှသည် မုန်တိုင်းအသွင် ကူးပြောင်းရန် အလားအလာရှိနေပါတယ်။
ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ သေချာ စိစစ်ဖို့လိုပါတယ်။
အထက်ပါခန့်မှန်းချက်များကို ကြည့်ပြီး မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အနေအထားကို ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်များ ပထမအကြိမ် စုပေါင်းဘုံကထိန်ခ...
တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်များအား ကထိန်သင်္ကန်းနှင့် ...
မန္တလေးမြို့အနှစ် တစ်ရာ့ငါးဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆော...
မန္တလေးတက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာန ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင...
စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်များ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ဆီမီးပ...
ဒီကနေ့ အလှူပြုကြတဲ့ နေရာတစ်ခုကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သာ...
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ၀ဏ္ဏကျော်...
ဖိုးချစ်ရဲ့ ကမ္ဘာကျော် နှစ်ပါး လက်မှတ်ထိုးပွဲ ကျင်း...
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် ရန်ပုံငွေ ဘောလုံး...
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်သူများအတွက် ဇာတ်မင်းသားများ စုပေါ...
ရန်ကုန်တိုင်းနှင့်ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘက်သ...
စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်များ စဉ့်ကူး အမှတ်(၉၁)အမကတွင် လှ...
ကသောလက်ဖြင့် ကူညီမည့် မင်းသားလေးများ ယနေ့ ရန်ကုန်သ...
ရန်မျိုးလုံ ဓမ္မာရုံမှာ နောက်ထပ် ဘုရားတစ်ဆူ ထပ်မံတေ...
ဆိုင်း၊ ဘိသိက်၊ အငြိမ်လူရွှင်တော်၊ မင်းသမီးများစုပေ...
မန္တလေးလူရွှင်တော်များ နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွက် အလှူခံထွ...
မန္တလေးမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် ဆုတောင်...
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံး၊ ပျောက်ဆုံးစာရင်း...
စိတ္တသုခပရဟိတ လူငယ်များရဲ့ နာဂစ် မုန်တိုင်း ခံရသူမျ...